कोरोना संक्रमितको शव ब्यवस्थापन गर्ने विषयमा स्थानीय र प्रहरीबीच झ’ड’प, ६ राउ’ण्ड हवाई फा’यर – Dainik Sangalo
संक्रमितको शव ब्यवस्थापन गर्न लागेको जानकारी पाएपछि सयौंको संख्यामा मिलनचोकमा जम्मा भएका स्थानीयवासीहरुले विरोध गरेका थिए । उनीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा शव गा ड् न नहुने भन्दै विरोध जनाएका हुन् । स्थानियको अवरोध पछि प्रहरीले हटाउन खोज्दा झ ड प भएको हो । प्रहरीले आ श्रु ग्यास र हवाई फा यर समेत गरेको छ । प्रहरीले ६ राउ न्ड आ श्रु ग्यास र ६ राउ ण्ड हवाई फा यर गरे पनि स्थानीवासी आफ्नो मागबाट पछि हट्न मानेका थिएनन् ।
‘पछिल्ला दिनमा झण्डै एक तिहाइमा कडा खालका लक्षण देखिएको छ। निधन हुने दर पनि बढेको छ’, उनले भने, ‘यो अलिकति ग म्भी र खालको अवस्था हो। अब झनै सतर्कता अपनाउनुपर्छ।’उनका अनुसार साउन अघिसम्म नेपालमा ९९ प्रतिशत संक्रमितमा कुनै लक्षण देखिएका थिएनन्। अहिले भने बिरामीलाई ज्वरो, रुघाखोकी, जिउ थाक्ने, श्वास फेर्न समस्या हुनेजस्ता लक्षण देखिन थालेका छन्। त्यस्तै, विभिन्न रोग भएका बिरामीलाई आईसीयूमा राखेर उपचार समेत गर्नुपरेको छ। फोटो फाईल
Prevश्रीमान भारतमा छन्, पहिरोले श्रीमती दुई छोरा र १० महिनाकी छोरीको लियो ज्यान
Nextअशोक दर्जीकी फुपू र बुबा मध्यरातमा रुँदै मिडियामा, आखिर के भयो ?
हिलोमा कुस्ती खेलेर छत्र शाही बिवादित बनेपछि कल्पना दाहालले यस्तो भनिन, के टिका सानुसँग उनको दुश्मनी छ !
सिन्धुपाल्चोकमा बाढी र पहिरोमा परी सातको मृत्यु,२ जनालाई नेपाली सेनाकाे हेलिकोप्टरबाट उद्दार
मृ,ता,व,स्थामा भाले बा,घ भे,टियो …..भिडियो हेर्नुस